Mission/Vision » Computer University (Myikyina)
ပညာရေးရည်မှန်းချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) အနေဖြင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အထိနောင်(၅)နှစ်အတွင်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးတို့တွင် အရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ အမြန်ဆုံးလျှောက်လမ်းနိုင်စေရေးနှင့်၊ IT နှင့် ICT နယ်ပယ် များတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းလာနိုင်စေရန် ရည်မှန်းချက်ထားရှိပါသည်။
ထိုသို့ချမှတ်ထားသည့် ပညာရေးရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် နိုင်စေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းတာဝန်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ကွန်ပျူတာ လက်တွေ့အသုံးချ လုပ်ငန်းခွင်၀င်ရောက်နိုင်သူများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊
(၂) ICT နယ်ပယ်တွင် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား ရယူဆောင်ရွက် နိုင်မည့် အရည်အသွေးများပြည့်မှီသော ပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊
(၃) ICT နယ်ပယ်နှင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချ (Software/Hardware) သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊
(၄) ဒေသခံပြည်သူများကြား ICT နှင့် ကွန်ပျူတာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးပွား လာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်၊
(၅) နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ တိုးမြှင့်အကောင်အထည်ဖော်လာ နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
Computer University (Myitkyina) has the objectives (visions) to promote implementation in human resource development and research areas; to become as quality driven (international standard) University; and to keep up with international ICT and IT areas.
In order to be successfully carried out above objectives, the following activities will be carefully planned and implemented in coming5years.
To come out citizens with ICT skills in all sorts of fields using computer, computer professionals and entrepreneurs to support the national development activities,
To produce qualified computer professionals who will be able to acquire and do national and international job opportunities in the field of ICT,
To be able to carry out ICT and IT applied research projects (Hardware and Software) at international level,
To increase ICT and computer knowledge among local people in Kachin State,
To be able to promote Computer University (Myitkyina) as an international Level,
နေ့စားပုတ်ပြတ်အလုပ် လုံခြုံရေး၀န်ထမ်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး၀န်ထမ်း ခေါ်ယူခြင်း
2018 Final Exam Result
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများမှ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
SAMSUNG 2018 Entrance Exam (30-8-18)
2017-2018 1CST Entrance List
Total views : 80918